I-Vibex: isalathiso sokungazinzi kwimarike yaseSpain | Ezezimali
Ngokuqinisekileyo awuzange uve ngeVibex kwihlabathi lotyalo-mali? Ewe, sisalathiso esinokunika isikhombisi esingaqhelekanga ukuvula okanye ukuvala izikhundla kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ngenxa yokuba, i-Vibex sisalathiso sokungazinzi kwimarike yaseSpain. Apho kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukungazinzi kubalwa ngokuthe ngqo kumaxabiso okhetho lokukhetha ukulinganisa ixabiso lesitrayikhi ngasinye ngomgama wayo kwiasethi esezantsi. Ngokuchanekileyo kule nkalo apho le index yesitokhwe yoqobo izibonakalisa khona.
I-Vibex enjalo ayibandakanyi ukhuseleko okanye iinkampani ezidwelisiweyo. Kungenxa yesalathiso soloyiko kunye ne IVIX eUnited States kwaye oko kusetyenziswa ukwazi imeko yokwenyani yeemarike zezabelo kwimzuzu ethile. Phakathi kwezinye izizathu kuba ibonisa ukuba imeko inokuba yeyiphi kwiimarike zezemali eziza kuthatha. Ewe kunjalo, ayingomthombo wesalathiso ovela rhoqo kumajelo eendaba ezoqoqosho. Ixesha nexesha kuphela kwaye ngenxa yesizathu esithile esingenanto yakwenza nexabiso lemarike yesizwe eqhubekayo.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, siza kujonga ukuba le index inokwenzeka njani ncede wena ngaxa lithile kubomi bakho botyalo-mali. Ngamaqhinga amancinci onokuthi uwafake ekusebenzeni kwakho ukusukela ngoku. Kuba awunakulibala ukuba inokubonelela ngenqanaba lokungena nelokuphuma kwiimarike zokulingana zikazwelonke ngakumbi i-Ibex 35. Kuya kufuneka uziqhelanise nokusetyenziswa kwayo kwaye unake ingqalelo kwiintshukumo ezinokuqikelela.
1 I-Vibex: amanyathelo okuguquguquka
2 Isebenza njani kwimarike yemasheya
3 Kwimisebenzi yexesha elifutshane
4 Uloyiko luyathengiswa esidlangalaleni
5 Inxulumene kakhulu ne-VIX
6 Umthombo wesalathiso kubatyali mali
I-Vibex: amanyathelo okuguquguquka
Mhlawumbi uyaqonda ukuba igama lakhe ivela kwi-Ibex 35 kunye nonobumba v ohambelana nokuguquguquka. Ingxelo epheleleyo yenjongo malunga nento oza kuyifumana ukusukela ngoku. Kuya kufuneka sijonge kutyalo-mali lwethu lwasekhaya kwiVibex kwaye ukuba sifuna ukulinganisa ukungazinzi kwehlabathi kuya kufuneka siye kwelinye icala leAtlantic, ngeVIX ebesikhe sayichaza ngaphambili. Ayizizo ii-indices ezilandelwa ngokubanzi yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi, kodwa oku kufanelekile kungatshintsha ukusukela ngoku.
Ingxaki enkulu abathengisi botyalo-mali bayakuba nayo kukuba abayi kuba nakho ukuyilandela kamnandi kuba ingaboniswanga kwinxalenye enkulu ye amaqonga ezemali. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, asizukukhetha ngaphandle kokuya kwimimandla eneemfuno ezizodwa apho kukho khona le nto ibalulekileyo. Ukuba siyayisombulula le ngxaki kuya kuba lula ekuphuculweni kokusebenza kwimarike yemasheya. Ukuze ngale ndlela, yinxalenye yezicwangciso zakho zotyalo-mali. Njengokuhlalutya kobuchwephesha, sisixhobo esinamandla sokuthenga kunye nokuthengisa isitokhwe.
Isebenza njani kwimarike yemasheya
Ewe, xa sele sichonge iVibex, akukho mathandabuzo okuba siza kuba nolwazi oluthe kratya malunga noko kufuneka sikwenze kwizabelo zaseSpain. Kuphela kwiimarike zesizwe kuba ifuthe layo kwiimarike zamanye amazwe alikho ngokuthe ngqo njengoko kusengqiqweni ukucinga ukuba kuqinisekiswa ihlelo labo. Ngokusisiseko ilinganisa ukungazinzi kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain kwaye kufunyaniswe ukuba kuninzi ukungazinzi, luphawu lokuvala izikhundla ngokukhawuleza. Kuba sisazisi esincinci malunga neendlela ezinokuthi zithathwe ziimarike zezemali ukusukela kuloo mzuzu ukuya phambili. Oko kukuthi, i-bearish, kubuncinci okanye kubunzulu obukhulu kwaye inokuba yindawo yokuqala ukuba kwisikhundla sokuhlawulwa ngokupheleleyo.
Ngokuchasene noko, ukuba i-Vibex ibonakalisa ukuba ukungazinzi kuncinci, sisilumkiso ukuba unakho izikhundla ezivulekileyo kwi-Ibex 35 ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Hayi ngelize, uxela kwangaphambili ukuba ukonyuka kunokufakwa kwizabelo zaseSpain. Ngaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobuchwephesha kwaye mhlawumbi kude kube kwimeko yokujonga izinto ezisisiseko. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuxhasa inkxaso ukuze ukwazi ukwenza izigqibo zakho ngokubhekisele phambili ngakumbi kunangaphambili. Ngokubalwa kwimpazamo ngokungathandabuzekiyo incinci kakhulu kwaye akufuneki ujonge
Kwimisebenzi yexesha elifutshane
Nangona yonke into izakuxhomekeka kwisicwangciso osisebenzisayo ngalo lonke ixesha. Kwaye ngaphezu kwako konke, ixesha elisigxina apho utyalo-mali lwakho luza kubhekiswa khona: lufutshane, luphakathi okanye lude. Kungenxa yokuba ungalibali ukuba iVibex iluncedo ngakumbi kwi ixesha elifutshaneOko kukuthi, kwintengiso yemasheya ngesisombululo esikhawulezileyo. Kulapho ukusebenza kwayo kukhulu ngakumbi kuba kumaxesha amade akunakubakho njengenkxaso yokwenza imisebenzi kwezi asethi zemali.
Ngale ndlela, ii-indices ezingama-Ibex 35 zisandula ukwaziswa ziiSpanish Stock Exchanges kunye neeMarket (BME). Ezi zalathiso zihambelana nokungazinzi kunye nesicwangciso esineenketho kwaye zibaluleke kakhulu kubatyali mali. Ke ngale ndlela bavumela ukubekwa esweni ngokuchanekileyo kwezicwangciso eziphantsi zokungazinzi ezivelisa i-alpha. Kwaye ngaloo ndlela yonge imali kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo kwimisebenzi eqhutywa kwiimarike zezabelo. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, injongo elandelwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Uloyiko luyathengiswa esidlangalaleni
Njengakwisalathiso se-VIX e-United States, i-Vibex linganisa uloyiko ngabatyalomali, ngenye indlela. Akumangalisi ukuba ibonakalise imeko yengqondo yakho kunye nalapho unokuhambisa khona iintshukumo zakho kwiintsuku ezizayo. Akunakulityalwa ukuba kwezi asethi zemali, ukungazinzi kunye nokusingqongileyo kuyinto engaphezulu kwekhonkco, kwaye leyo yinto eyaziwayo ngabatyali mali abanamava ngakumbi kwiimarike zezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba banokuthatha ithuba kwezi meko zikhethekileyo. Zombini ukuvula kunye nokubuyisa izikhundla kwiimarike ze-equity.
Ukusuka kule ndlela yohlobo oluqhelekileyo, akukho mathandabuzo ukuba kufuneka sinike ukubalasela kwesi salathisi sithetha ngaso kweli nqaku. Ngobungakanani obufanayo namanye amanani amelwe kuhlalutyo lobuchwephesha, kwaye oko kungakhokelela ku ukulungiswa kweentshukumo kwimarike yemasheya. Ngenjongo eyodwa yokwenza ukonga kunenzuzo ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo. Ayilolize, injongo yabo kukusebenza njengezikhombisi zentengiso, kuba ukukhutshwa kwayo nayiphi na imveliso enxulumene nayo akulindelekile kwixesha elifutshane. Ungakulibali ukuba ufuna ukufezekisa ukuba iinjongo zakho kwiimarike zizalisekisiwe ngendlela eyonelisayo kwimidla yakho.
Inxulumene kakhulu ne-VIX
Ewe kunjalo, zininzi izinto ezifanayo ne-American VIX kuba injongo yayo ibifana okoko kumgaqo-siseko wayo. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba isalathiso sesitokhwe yikhowudi ebizwa ngokuba yiChicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Ngexesha apho kukho ukungazinzi okuphezulu, i-VIX ifikelela kwinqanaba eliphezulu kwaye kwentshukumo echaseneyo yehla kakhulu. Ngamanye amaxesha unika izikhokelo malunga nento ekufuneka uyenzile ukuphucula inzuzo kwiimarike ingeniso eguquguqukayo. Le yinto elula kakhulu kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bayifumane. Ayisiyo kwaphela isicwangciso esintsokothileyo njengoko abanye banokuqonda ngeli xesha.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba kwezi indices zesitokhwe Abacaphuli ukhuseleko okanye nantoni na efana nayo. Ziimvakalelo zentengiso ezisemngciphekweni kwaye ngenxa yoko zikunika umkhondo obalulekileyo malunga nendlela ehamba ngayo iimarike zentengiso ukusuka kuloo mzuzu kanye. Ukuthembeka okuphezulu kakhulu kuba kunqabile ukuba kuphosakele ukubonelela ngesifo malunga nenyani yezabelo. Ngomgangatho ophezulu wengqondo kulungelelwaniso lwamanqanaba ayo, njengoko kusengqiqweni ukucinga kwelinye icala.
Umthombo wesalathiso kubatyali mali
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba esi salathisi sibizwa ngokuba luloyiko ukuthatha indawo yamaziko minyaka le kwaye kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukuba ngumthombo obonakalayo wesalathiso kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphezulu kwamanye amacebo asetyenziswa kwicandelo labucala lotyalo-mali. Njengomnye umahluko obekiweyo ngokubhekisele kwezinye iimodeli zokuphumeza ezi ndlela. Apho into ephambili ngokubaluleka kukwazi ukuphendula kweemarike zezemali. Kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunale index yesitokhwe esithetha ngayo kweli nqaku.
Alithandabuzeki elokuba ingxelo yesi sihloko iya kubamba umdla wabafundi bethu. Apho eyona nto ibalulekileyo kukuba banokuxhamla kule index ukwenza imisebenzi enenzuzo ukusukela ngoku. Ngaphandle kwezinye izinto eziya kuthi zigqitywe kwamanye amanqaku kwiimarike zezabelo. Ukuze zisetyenziswe nayiphi na iprofayili yomtyalomali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Vibex: isalathiso sokungazinzi kwimarike yaseSpain